Air India လေကြောင်းလိုင်းအား ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရာတွင် မူလပိုင်ရှင် Tata လုပ်ငန်းစုက တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့ခြင်း | Commerce Journal
Home » -ပြည်ပရှိမြန်မာသံရုံးများမှပေးပို့သောသတင်းများ » Air India လေကြောင်းလိုင်းအား ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရာတွင် မူလပိုင်ရှင် Tata လုပ်ငန်းစုက တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့ခြင်း » အထွေထွေ
Wed, 10/13/2021 - 10:33 -- journal_editor
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ လုပ်ငန်းအရှုံးပေါ်လျက်ရှိသော နိုင်ငံပိုင် Air India လေကြောင်းလိုင်းအား ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယခုအခါ Talace Pvt Ltd အား အပြီးသတ် တင်ဒါအောင်မြင်သူအဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်ကြောင်း အိန္ဒိယအစိုးရက ၈-၁၀-၂၀၂၁ နေ့တွင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ Air India လေကြောင်းလိုင်းအား ပုဂ္ဂလိကသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်း ရောင်းချနိုင်ရန် အတွက် စိတ်ဝင်စားမှုအဆိုပြုလွှာ (EoI) တင်သွင်းရန် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၌ ပထမအကြိမ် ဖိတ်ခေါ်စဉ် က လျှောက်ထားမည့်သူမရှိသဖြင့် အိန္ဒိယအစိုးရက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ဒုတိယ အကြိမ် ထပ်မံဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီး တင်ဒါလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပြုလွှာ တင် သွင်းယှဉ်ပြိုင်သူများအနက် လုပ်ငန်းစု ၂ ခုကသာ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပြီး SpiceJet လေကြောင်းလိုင်းမှ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Ajay Singh ဦးဆောင်၍ အခြားလုပ်ငန်းရှင်များ ပူးပေါင်းပါဝင် သည့်လုပ်ငန်းစုက ကမ်းလှမ်းသောဈေးနှုန်းထက် ရူပီးငွေ ၂၉၀၀ ကုဋေပိုမိုလျက် စုစုပေါင်းတန်ဖိုး ရူပီးကုဋေ ၁၈၀၀၀ ဖြင့် Tata လုပ်ငန်းစု လက်အောက်ရှိ Talace လီမိတက်က တင်ဒါအောင်မြင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန (DIPAM) မှ အတွင်းဝန် Mr. Tuhin Kanta Pandey က တင်ဒါအောင်မြင်သူ ရွေးချယ်ခြင်းအား ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ Talace လီမိတက်သည် နိုင်ငံပိုင် Air India လေကြောင်းလိုင်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် လွှဲပြောင်းရယူရန် တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း၊ ၎င်းလေကြောင်းလိုင်း၏ လုပ်ငန်းရပ်များအား ပိုင်ရှင်အသစ်ထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် နေ့အတွင်း အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုပါသည်။
Talace လီမိတက်သည် အစိုးရထံသို့ ငွေသား ရူပီးငွေ ကုဋေ ၂၇၀၀ ပေးသွင်းလျက် Air India လေကြောင်းလိုင်းက တင်ရှိနေသော အကြွေးကျန်ငွေ ရူပီး ၁၅၃၀၀ ကုဋေအား တာဝန်ယူ ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ Air India လေကြောင်းလိုင်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအား လွှဲပြောင်းရာတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ လေဆိပ်များ၌ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော Air India Express လေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၏ ၁၀၀% နှင့် AISATS မြေပြင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၏ ၅၀% ပါဝင် မည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် မြေနေရာနှင့် အဆောက်အဦတို့ အပါအဝင် တန်ဖိုးအားဖြင့် ရူပီးငွေ ၁၄၇၁၈ ကုဋေရှိသော ပင်မပုံသေပိုင်မဟုတ်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ နိုင်ငံ ပိုင် လုပ်ငန်းဖြစ်သော Air India Assets Holding Limited (AIAHL) ထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ် မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Talace လီမိတက်က တာဝန်ယူပေးဆပ်မည့် ငွေပမာဏကို ထုတ်နှုတ် ပြီးနောက် Air India လေကြောင်းလိုင်းက ပေးဆပ်ရန်ကျန်ရှိနေသေးသည့် အကြွေးငွေ ရူပီး ၄၆၂၆၂ ကုဋေကို AIAHL ကပင် ဆက်လက်တာဝန်ယူ ရှင်းလင်းရမည်ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်ရာ Air India လေကြောင်းလိုင်းအား ၁၉၅၃ ခုနှစ်၌ နိုင်ငံပိုင်အဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုမီက မူလပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော Tata လုပ်ငန်းစုအနေဖြင့် ပြည်တွင်းရှိလေဆိပ်များ၌ Air India က လုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိထားသော ပြည်တွင်းခရီးစဉ် ၄၄၀၀ နှင့် ပြည်ပခရီးစဉ် ၁၈၀၀ တို့အတွက် လေယာဉ်ဆင်းသက်ခွင့်နှင့် ရပ်နားခွင့်နေရာများကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ပရှိလေဆိပ်ပေါင်း ၉၀၀ တွင် အလားတူဆိုက်ရောက်ရပ်နားခွင့်ကိုလည်းကောင်း ထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေး နည်းဥပဒေများအရ Talace လီမိတက်သည် Air India ၌ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေဆဲ ဝန်ထမ်းအားလုံးကို လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းရယူသည်မှ ၁ နှစ် ကာလ အထိ ဆက်လက်ခန့်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိကာလတွင် အဆိုပါလေကြောင်းလိုင်း၌ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း ၈၀၈၄ ဦးနှင့် စာချုပ်သက်တမ်းဖြင့် လုပ်ကိုင်သည့်ဝန်ထမ်း ၄၀၀၁ ဦးတို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။ Air India လေကြောင်းရှိ လေယာဉ်များမှာ သက်တမ်းကြာမြင့် နေပြီဖြစ်ပြီး လေယာဉ်အုပ်စုအရွယ်အစားနှင့် လိုက်ဖက်ညီသည့် လုပ်ငန်းအင်အားသို့ လျော့ချခွင့် ရှိသော်လည်း တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ၌ လွှဲပြောင်းရယူပြီး ၁ နှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းပမာဏကို ၅၁% အောက် လျော့ချခွင့်မရှိကြောင်း၊ လက်ရှိ လုပ်ငန်းအစီအမံများကို ၃ နှစ်အထိ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Air India ၏ Brand name ဖြစ်သော Maharajah Logo ကို ၅ နှစ်ကြာ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအား နိုင်ငံခြားသားလုပ်ငန်းရှင်သို့ လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်မပြုကြောင်း သိရှိရသည်။
လက်ရှိကာလ၌ Vistara နှင့် AirAsia India လေကြောင်းလိုင်းများကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် Tata လုပ်ငန်းအုပ်စုသည် ရှေ့လာမည့် လအနည်းငယ်အတွင်း Air India လေကြောင်းလိုင်း၏ လုပ်ငန်းရပ်အဝဝကို လွှဲပြောင်းရယူနိုင်ရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။ Star Alliance အဖွဲ့ဝင်ဖြစ် သော Air India ၏ လုပ်ငန်းရပ်များအား ရယူပြီးချိန်တွင် လေကြောင်းလိုင်း ၃ ခုပိုင်ဆိုင်မည့် Tata လုပ်ငန်းအုပ်စုသည် အိန္ဒိယပြည်တွင်း လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်၌ IndiGo လေကြောင်း လိုင်း၏နောက်တွင် ဒုတိယအကြီးမားဆုံး နေရာသို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
Source: 1. Finally, Air India returns home to the Tata group after 68 years, 8-10-2021, Forbes India
2. Air India returns to Tata after 68 years, 9-10-2021, Economic Times
3. Looking forward to working with govt to complete Air India acquisition in few months: Tata Sons, 11-10-2021, Economic Times